Taliyihii ugu horeeyay Ciidanka Booliiska Soomaaliya oo ku geeriyooday dalka Mareykanka - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaTaliyihii ugu horeeyay Ciidanka Booliiska Soomaaliya oo ku geeriyooday dalka Mareykanka
Taliyihii ugu horeeyay Ciidanka Booliiska Soomaaliya oo ku geeriyooday dalka Mareykanka
October 26, 2017 Puntland Mirror Somalia 0
Sawirka: Marxuum Maxamed Abshir Muuse.
Minneapolis-(Puntland Mirror) Taliyihii ugu horeeyay Ciidanka Booliiska Soomaaliya Maxamed Abshir Muuse ayaa ku geeriyooday isbitaal kuyaala magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka, sida ay xaqiijiyeen qoyskiisa.
Waxa uu jiray 91-sanno. Waxaa uu wax ku bartay dalka Talyaaniga.
Maxamed Abshir ayaa noqday taliyaha Ciidanka Booliska Soomaaliya sanadkii 1960 waxaana uu taliye u ahaa muddo sagaal sanno ah ilaa iyo inqilaabkii 1969 ee Maxamed Siyaad Bare.
Sanadkii 1969 ayaa waxaa xiray Maxamed Siyaad Bare kadib markii Maxamed Abshir uu ka hadlay isaga oo kasoo horjeeda inqilaabka.
Kadib markii uu burburay taliskii Maxamed Siyaad sanadkii 1991, Maxamed Abshir ayaa noqday hoggaamiyaha Jabhadii SSDF.
Maxamed Abshir ayaa ku noolaa gudaha Mareykanka tan iyo sanadkii 1998, bishii July ee sanadkan ayaa la dhigay isbitaal kadib xanuun deg deg ah.
July 24, 2017 Taliyihii hore ee Ciidanka Booliiska Soomaaliya oo la dhigay isbitaala kuyaala Minneapolis
January 23, 2018 Madaxweyne Farmaajo oo dib ugu noqday Muqdisho kadib 16-beri oo safar ah
December 12, 2018 Raysulwasaare Xasan Cali Khayre oo ku amray Wasaaradda Maaliyada in ay bixiso $150,000 oo lagu dhisayo garoonka kubada cagta Garoowe
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka tacsiyeeyay geerida ku timid taliyihii ugu horeeyay ciidanka booliiska Soomaaliya Maxamed Abshir Muuse
BAKU -(Puntland Mirror) Madaxweynaha dalka Azerbaijan Ilham Aliyev ayaa xaaskiisa Mehriban Aliyeva u magacaabay madaxweyne ku xigeenka dalka, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay madaxtooyada Azerbaijan maanta oo Talaado ah. Dadka reer Azerbaijan ayaa bishii [...]
Kuweyt-(Puntland Mirror) Amiirka Kuweyt Shiikh Sabaax Axmad Al-sabaax ayaa soo saaray digreeto uu ku kala dirayo baarlamaanka dalka, si doorashada loo qabto xilli hore. Wakaalada wararka dowlada ee KUNA ayaa baahisay ogeysiinta maanta oo Axad [...]